WittyParrot: Zivo Inotangisa yekutengesa uye Kushambadzira Kutaurirana | Martech Zone
Chishanu, February 5, 2016 China, Kukadzi 4, 2016 Douglas Karr
Mumushumo kubva kuMcKinsey Global Institute, Hupfumi hwevanhu: Kuzarura kukosha uye kugadzirwa kuburikidza nehunyanzvi hwehukama, vaongorori vakaona kuti wepakati zivo mushandi akatambisa maawa makumi maviri nemasere pamwedzi achitsvaga nekugadzirisa zvinyorwa. Chete 28% yemagwaro kukambani aive mune anobatsira fomati. Uye kusvika pamakumi masere muzana ezvekutengesa uye kushambadza chibatiso hachina kana kumboshandiswa.
Vashambadzi vanopokana nekuona mameseji ekutengesa uye kusagadzikana pasangano rese, pamwe nekuyera mashandisiro aro nekubudirira. Kutengesa uye rutsigiro rwevatengi vanopokana nekutsvaga nekuparadzira ruzivo kune vanotarisira nevatengi.
WittyParrot iri kusangana nedambudziko iri neyemukati manejimendi uye nehupamhi chikuva iyo inosimudzira iyo kumhanya, kusagadzikana uye kudzora kwekutaurirana kwesangano.
Kuburikidza neiyo intuitive interface, vashandisi vanokwanisa kurodha, kugovana, uye kuwana zvemukati zviri nyore, vozviisa mune yakakodzera svikiro, uye kunyange kuyera mwero wekupindura pairi.
WittyParrot inobatsira masangano kuve anobudirira kuburikidza:
Kuziva nekutapa ruzivo rweatomized izvo zvakakosha kune ruzivo vatengi.
Kugovana ruzivo nenzira inowirirana pane bhizinesi uye kuona kupinda mukati kweiyo ruzivo uye kugonesa vashandisi kugadzira yavo Wits (Zivo nuggets).
Kupa inoenderana uye inoteerera user experience pane chero chishandiso, icho chinogara chiri-on, kuitira kuti vanhu vakwanise kushanda online kana isina internet.
Kugonesa vashandisi kukurumidza tsvaga, dhonza uye udonhedze ruzivo rwakakodzera mugwaro, mharidzo kana email yavari kushanda.
Tracking kushanda kweruzivo irworwo kuwedzera kushandiswa kwezviri kushanda kuburikidza nekuongororwa kwenhamba, chiyero, kupindura nekugovana.
WittyParrot ine yakawandisa interface iri nyore kushandisa kune wese munhu ari musangano. Mushandisi anogona kuziva uye kuisa yavo nugget yeruzivo, mufananidzo, kana imwe faira zviwanikwa zvakananga kubva kune iyo widget:
WittyParrot zvakare yakagadzira kusangana, heino imwe ine Oracle:
Kumbira Witty Parrot Demo
Tags: content managementzvemukati zvirimoruzivo manejimendiruzivo ruzivovashandi vanozivapangatauraOracle zvemukati manejimendichihwenga chine hungwaruwittyparrot